zimbabwe crisis on News24
ARTICLES RELATING TO ZIMBABWE CRISIS
Zimbabwe's passport-issuing service has ground to a halt, officials said Monday, leaving many citizens trapped in the country as its economic crisis worsens.
Tanzanian officials say Africa's youngest billionaire has been kidnapped, and leading fast food chains in Zimbabwe have reportedly shut down their businesses due to cash shortages.
Zimbabweans of all races, clad with the country's flag, stretched out their hands towards Zimbabwe's parliament to pray for a smooth transition into a new government at the Africa Unity Square in Harare on Monday.
0 comments5941 Views
0 comments3517 Views
WATCH: 'A young lion has been awakened' - ZANU PF Youth amid coup fears
The ZANU-PF Youth League says it 'is a lion which has awakened' after the Zimbabwe military warned of a possible interference if ruling President, Robert Mugabe, continues to get rid of veteran politicians in a bid to help his wife, Grace Mugabe, succeed him. Watch.
0 comments16728 Views
Zimbabwe police arrested trade union leaders and scores of activists ahead of planned marches over the country's worsening economic crisis, lawyers have said.
Zim leader Mnangagwa's cabinet 'divided over new tax' – report
0 comments1897 Views
University of Zimbabwe students have vowed not to write examinations until President Robert Mugabe steps down.
0 comments11656 Views
Zimbabweans largely heeded calls by the military, with businesses such as Pick n Pay and Nando’s closing early and Harare streets emptying up.